Milan eRoma ngu zemininingwane noma eRoma Milan yintfo kube lula futhi kuhleleke. Ingasaphathwa amahle! Ungakwazi ukuthatha isitimela eshibhile okungathatha isikhathi eside ukwedlula 3 amahora kodwa lokho Izitimela ezisuka eMilan ziye eRoma zikuvumela ukuthi ungene e izitobhi kudingekile ukuhlola. Noma ungagxuma esitimeleni seTrenitalia esinejubane elikhulu seFreccia, okuyinto ethatha nje 3 amahora 3 amaminithi, okungaphansi kakhulu kohambo oluphelele ngendiza! Noma ngabe yini oyinqumayo lo mhlahlandlela osheshayo uzokusiza ekwenzeni isinqumo esihle kakhulu wena kanye nohambo lwakho!
Nge Milan iyinhloko-dolobha, akumangalisi ukuthi izivakashi zithuthelekela e izigidi zabo Lombardy unyaka ngamunye. Kodwa nangale eyintandokazi imfashini, amaningi ngaphezulu uyisidingo ukuvakashelwa izindawo esifundeni Lombardy-Italy bakhalela ababezobahambela.
Siyakholwa Emilia Romagna olufana kalula ezikhangayo lodumo ngaphezulu Tuscany futhi Lombardy nokunikezwa ongakhetha temptingly ethengekayo ukudla futhi yokuhlala. Ikona le Milan eRoma ngu zemininingwane uhambo imfihlo egcinwe kahle ngokombono wethu kodwa futhi neRoma eya eMilan ngesitimela! Jump off kulesi siteshi uhambe ukuhlola!
Ngaphansi kokuhamba ngemizuzu engama-30 ku- Isitimela esinejubane eliphezulu kusukela Venice, WasePadua ngokuvamile kakhulu bambalala kusukela iningi izivakashi. Nokho, elizenzayo usuku uhambo ezinkulu ezivela Venice, ukunikela siqonde ngezinga elithile umlando ocebile ka umuzi owake waba isigodi enamandla.
Ikhaya eyunivesithi Italy yesibili endala, eyasungulwa ngo 1222, WasePadua aye wasigcina emkhathini vivacious of idolobha elineyunivesithi, nge piazzas ephapheme ezitaladini arcaded, amaningi amathilomu kanye nemigoqo lapho Spritz ikuyo yonke indawo kuba de rigueur njengoba imimoya usuku ku kusihlwa. Ungaphuthelwa!
Ngoba umuntu owayehamba Milan uya eRoma nge Trenitalia Izitimela noma enye indlela ezungeze umzila futhi ecinga egqinsiwe ngokujulile, imvamisa engavuniswanga, futhi ngesibindi eyiqiniso nesipiliyoni travel.
Sincoma ukuthi ubheke eGenoa (okuyinto efana Venice yake republic enamandla zasolwandle) abansundu ezikhundleni eziphezulu ngegama Sea Ligurian. Ukunikeza isipiliyoni eluhlaza kakhulu futhi real, umqondo undiluted yomlando, futhi uhlangabezana nesigcawu sezobuciko somuzi futhi izakhiwo esiphawulekayo. One of the top reasons we enjoy it so much is that kukhona art omkhulu kanye iminyuziyamu kukhona uncrowded! Ungathola imisebenzi nge Caravaggio, van Dyck. Rubens, Durer futhi Veronese ku Palazzo Bianco futhi Palazzo Rosso futhi Ogle nezinye Izwe Elidala yobuciko izimpawu zendawo eziningi, efana iRoyal Palace ne-National Gallery Palazzo Spinola. Kukhona futhi izibonelo ezinhle Genoese School yobuciko, abavelele ekhulwini le-17, ku Palazzo Blanco.
Trenitalia ngesivinini esikhulu Ijubane (OF) izitimela ushiye Milan Central Station kanye noma kabili ngehora eRoma Termini esiteshini - sekulinganiswa 90 izitimela ngelanga. Bokuqala Trenitalia amahlamvu isitimela Milan Central Station ngesikhathi 5:00 a.m. Isitimela sokugcina eRoma eshiya Milan ngesikhathi 11:18 p.m.
Amathikithi wesitimela esinejubane elikhulu e-Italy anokungezwa okuhle kakhulu. Izitolo zikagesi esihlalweni sakho ukushaja amadivayisi kanye ne-WiFi egibela izitimela zeFrecciarossa neFrecciargento. Nokho, isinali lizokwehla ngenkathi ungaphakathi Imigudu futhi eziteshini. Ungaba ne-cafe enhle yase-Italy emotweni yokudla kuso sonke isitimela. Kanye inqola ukudla okuletha Ungadla, sandwich, kanye iziphuzo ukuba esihlalweni sakho. Ekupheleni imoto ngayinye, uzothola lwegumbi nenala Racks esitolo umthwalo omkhulu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Milan Ukuya eRoma Ngezitimela zeTrenitalia” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmilan-rome-train%2F%3Flang%3Dzu – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
europetravel Italybytrain milan milano i-roma trainjourney travelrome